Booliska Ruushka oo xirxirey kumanaan ruux oo banaanbaxyo dhigayay (Sawiro) - Jowhar somali news leader
Home NEWS Booliska Ruushka oo xirxirey kumanaan ruux oo banaanbaxyo dhigayay (Sawiro)
Booliska Ruushka oo xirxirey kumanaan ruux oo banaanbaxyo dhigayay (Sawiro)
Ciidamada Booliska dowlada Ruushka ayaa xabsiga u taxaabay inkabadan labo kun oo ruux kuwaasoo banaanbaxyo ay ugaga soo horjeedaan xariga hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexey Navalny ka dhigayay magaalooyin ku yaal dalka Ruushka.
Navalny ninka sida weyn uga soo horjeda dowlada Ruushka ayaa la xirey dhowaan kadib markii uu ka soo laabtay dalka Jarmalka halkaa oo loo geeyay in laga soo daweeyo sun loo geliyay dharkiisa bishii August ee sanadkii la soo dhaafay, waxaana la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen mukhaabaraadka Ruushka.
Dadka la xirey ayaa waxaa ka mid ahayd xaaska hogaamiyaha mucaaradka, Yulia balse markii dambe ayaa la sii daayay.
Dowlada Ruushka ayaa hore uga digtey banaanbaxyada iyado sheegtay inuu jiro cudurka safmarka ah ee Covid 19,waxaana loo shacabka inay xabsi muteysan karaan haddii ay ka qeybgalaan banaanbax aan la fasaxin,hase yeeshee banaanbaxayaasha ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Ruushka iyadoo uu jiro qabow daran.
Kooxda la socodka banaanbaxyada ee OVD ayaa sheegtay in ugu yaraan 2,131 oo ruux oo 300 oo ka mid ah lagu xirey Moscow halka Saint Petersburg laga xirey 162 ruux. Balse tirada inta ugu badan ayaa lagu kala xirey inkaadan 70 magaalo oo ay ka dhaceen banaanbaxyada.
Navalny ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay isu soo bax weyn sameeyaan waxaana uu sugayaa maxkamad laga yaabo in xabsi sanado ah lagu xukumo.
banaanbaxyo ka dhacay dalka Ruushka
Previous articleOriginal leaders in Brazil sue Bolsonaro for murder and ecological destruction
Next articleHundreds protest against corruption and police brutality in Tunisia